Ungasasaza njani i Gameplay yakho yokuqala kwiTwitch
Xa inkqubo yakho yokudlala imiselwe, eyakho Ijelo leTwitch ugqibile kwaye ugqibelele, kwaye umdlalo wakho ukhethiweyo, lixesha lokuqala ukusasaza kwiTwitch. Thatha umoya omninzi emva koko ulandele la manyathelo:
NGAPHAMBI KOKUSASA, bhala amanqaku ambalwa malunga nento ofuna ukuyenza.
Mhlawumbi ucinga ukuba unayo le ngaphandle kwengxaki, kodwa ukuba awuqhelanga ukwenza bukhoma okanye ukusebenza nabaphulaphuli, unokufuna ukuba nombono wento ofuna ukuyenza kumdlalo kunye nento onokufuna ukuyithetha. kubantu abadlulayo kwaye bajonge umsinga wakho.
Konke oku-ukukhangela kokugqibela kuseto lwakho lokudlala, ukubhala amanqaku, kunye nokuseta indawo yakho yokurekhoda- kubizwa ulungiselelo kwangaphambili.
Qalisa umdlalo wakho.
Thepha i Yabelana iqhosha kwi-PS4 Dualshock Controller ebekwe ngasekunene kwi-Directional Pad yakho (ekwabizwa ngokuba yi-D-Pad) ukufikelela kwimenyu yeenketho (jonga lo mfanekiso ulandelayo). Ukusuka kwimenyu, khetha Usasazo lomdlalo ukuqalisa amanqaku okusasaza ekhonsoli yakho. Ukusuka kukhetho oludweliswe kwi-PS4, khetha Ukudibanisa ukunika ikhonsoli yakho ukufikelela kwiakhawunti yakho yeTwitch kunye nedashboard.
Kwi-Xbox One, cofa iqhosha elithi Xbox iqhosha elikwindawo ephezulu yomlawuli wakho ukufikelela kwiTwitch app. Nje ukuba usungule, cofa indawo Ukusasaza iqhosha.
Njengoko ikhonsoli yam iyiPS4, uninzi lweekhusi eziza kuthathwa ziya kuvela kwisibonisi sePlayStation. Nanini na xa kunokwenzeka, izikhombisi ze-Xbox ziya kubonelelwa.
Ukusuka kukhetho oludweliswe kwiPS4 kunye neXbox, nika iTwitch stream isihloko.
Kwi-PS4, emva kokunika igama umsinga wakho, skrolela ezantsi kukhetho lwentlalo kwaye ukhethe u-Facebook, u-Twitter, okanye zombini ukwazisa ukuba uza kuphila.
KwiPS4 kunye neXbox, khetha ifayile ye Qalisa ukusasaza ukhetho ukuqala ukusasaza.
Kwi-PS4, kukho iphepha elinye lokukhetha ekunikezela ukuba wenze uhlengahlengiso lokugqibela kuseto lwakho lweaudiyo nevidiyo. Unokujonga kwakhona iisetingi zakho apha okanye uye bukhoma ngokukhetha ukuqala ukusasaza kwakhona.
Iqhosha lokwabelana kwi-PS4 Dualshock Controller lingena kwimenyu ekuvumela ukuba ujike ikhonsoli yakho ibe sisixhobo sokusasaza.
Kwaye ngaloo nto, uyaphila. Umdlalo uvuliwe!
Wenza ntoni xa usasaza ngqo kwiTwitch
Ukuba yipodcaster okanye iTwitch streamer, ungacinga ukuba ukusasaza kukuhamba epakini kum. Ewe, nge-podcasting, ndinobunkunkqele bokuhlela, ndisuse ikhefu elingaqhelekanga, kwaye ndinqumle nantoni na enokuba ivakala ngathi inobuqili ngalo mzuzu kodwa xa idlala ifika njenge-crass okanye engafanelekanga. Ukusasaza sisilwanyana esahluke kakhulu. Yonke into oyicingayo noyenzayo iyagalela kwi-ether. Uyaphila, kwaye uzama ukudlala umdlalo wevidiyo lonke ngelixa usongeza uhlobo lwexabiso ngezwi lakho- kunye nomfanekiso wakho, ukuba ukwikhamera- yongezwa kumsinga. Kuya kuba sengqiqweni ukucinga, Ewe, abantu bazakubakhona ukuze babukele ijelo lam lomdlalo…, kodwa abantu beza nejelo ukuza kubona ukuba ungumdlali onjani kwaye ukuba unobuntu obunjani. Zintoni ii wena uza kuzisa itshaneli yakho? Uya kuma njani kulawulo? NGABA AWUZONWABISI ?!
Okulindelweyo, nokuba ucinga ukuba bakho okanye abakho, ikho yonke indawo; kwaye kukuwe ukuba wenze okungaphezulu kokudlala nje umdlalo.
Ngaba unayo nayiphi na imibono ofuna ukuyenza?
Mema abahlobo kwisondlo sakho. Ukuba uyazi ukuba unabahlobo kwi-intanethi, thumela umnxeba ukuba bakujoyine. Kuhlala kulula ukuthetha xa unabantu obaziyo kwi-mic kunye nawe, uncokola ngomdlalo we-umdlalo okanye ngobomi bokwenyani obuqhubekayo. Ukuba nale-banter yasemva nangaphandle iyakwenza imeko entle eya kukhuthaza ingxoxo yakho ukuba ithathe inxaxheba. Ke ngenisa abanye abantu obaziyo ukuba basebenze njengeenqanawa zokuqhekeza umkhenkce, emva koko ujonge njengoko ingxoxo yakho iba yinxalenye yesangqa sakho osithembileyo.
Ukuhlala nabahlobo kuyonwabisa kakhulu. Ukwenza ixesha labadlala umdlalo omtsha kwifidi yakho kupholile, nako. Khumbula nje: Ngumjelo wakho. Nguwe umbuki zindwendwe, uyinkokeli yeFireteam, umkhulu kwaye uphethe. Lo ngumboniso wakho. Ngamanye amaxesha, abahlobo abatsha (kunye nabadala) kunye nabadlala kuwo onke amacandelo banokuzama ukuqweqwedisa umsinga wakho. Ngamanye amaxesha, ayenziwa ngabom. Ngamanye amaxesha, iba lidabi lomyolelo. Ke, khumbula: umsinga wakho, imigaqo yakho, umnxeba wakho.
Unento onokuthetha ngayo. Ngaba ubambe imovie ngobunye ubusuku? Ngaba uzama into entsha kulawulo lwakho lwemihla ngemihla? Yeyiphi i-cuisine entsha oyisampula ngayo? Nokuba kwenzeka ntoni ebomini bakho, ukuba ukhululekile kuyo, inokusebenza njengebhodi yasentwasahlobo yakho kunye neNgxoxo ukuqala incoko. Ukutya kwakho kuba yibhodi enesandi kwiimbono zakho. Kwelinye icala, Ingxoxo iza kunye nawe, uvuma okanye ungavumelani nokuthatha kwakho izinto. Oku kunokuba yintwasahlobo yencoko.
Thetha ngeTwitch: Njengoko usasaza, uya kufumanisa ukuba kuninzi onokukufunda ngayo yonke le nto: ukusebenzisana kwabaphulaphuli, imiba yezobuchwephesha, ukwenza izinto ezininzi phakathi komdlalo nengxoxo, inkqubela phambili yomdlalo. Abaphulaphuli bakho banomdla wokwenene malunga nento oyenzayo kunye nendlela oyenza ngayo ukuba yenzeke, ke zive ukhululekile ukuthetha ngamava akho eTwitch. Yenza incoko emnandi.
Yintoni ebalulekileyo ekwenzeni umlambo ubandakanyeke kwaye unxibelelane nguwe, umphathi, othetha nengxoxo kunye nokugcina incoko iqhubeka. Oku kunokuba lula ukuba ukhaba umsinga wakho kunye nabaphulaphuli abalinganiselayo. Oku kunokuba nzima xa usasaza kwindawo engenamsebenzi. Nokuba ubungakanani kubaphulaphuli bakho, ukhona. Ukuba awubonakali ngathi wonwabela umsinga wakho, kukho ithuba elihle lokuba abaphulaphuli bakho abayi kuhlala. Yonwabela umdlalo wakho kunye nexesha lakho ngencoko.
Ukudibanisa ngamava ahlukileyo kuye wonke umntu. Kuya kubakho ukusasaza okuya kukhetha ukunganxibelelani nengxoxo yabo. Ingumbusi nomdlalo nje, kwaye kwezinye iimeko umphathi akakhange abonakale nakwikhamera. Le ncwadi ayiniki mithetho inzima kwaye ikhawulezayo kodwa yenza iingcebiso zokwenza umsinga wakho wonwabe ngakumbi kwiNgxoxo yakho kunye nawe. Ukuba ulungile ngejelo lakho leTwitch elibandakanya isandi somdlalo kuphela, emva koko umdlalo uye wonwabe.
Ungawusonga njani umsinga wakho weTwitch
Ubusoloko udlala isiqwenga esihle sosuku. Uziva ulambile, okanye mhlawumbi enye ebalulekileyo uyakunika inkangeleko - kwaye uyazi ukuba ndithetha ukuthini inkangeleko -Ke kuya kufuneka uhambe usongele umsinga wakho.
Ngokuqinisekileyo, unokumisa nje umsinga, ucime ikhonsoli yakho, kwaye ubize usuku. Eminye imijelo iyayenza loo nto. Ndiyifumana le ndlela, ngelixa ilula kwaye isebenza kakuhle, ikude kancinci. Uchitha ixesha kunye namandla kunye nabaphulaphuli bakho, ujongana noloyiso lomdlalo wakho kunye nemingxunya. Bayakwazi wena, kwaye mhlawumbi bade bazimisele ukuba ukonwabele ukoyisa komzuzwana. Uyila ibhondi kunye nabaphulaphuli bakho, kwaye xa ugqibile, uza kuthi… uphakame uhambe?
Yifowuni yakho ekugqibeleni, kodwa ukuya kwinto encinci ngakumbi kukwenza unxibelelwano kunye nengxoxo yakho yomelele. Ikwenza abantu bafune ngakumbi kuwe nakwitshaneli yakho.
Xa ukulungele ukugqiba umsinga wakho:
Ukuba uyazi ukuba umlambo wakho uza kufikelela esiphelweni, yazisa umlambo wakho nge Ndinomdlalo omnye kum… kwaye uqhubeke nokudlala.
Ekupheleni komdlalo wakho, cela ingxoxo yakho ukuba ubambelele eminye imizuzu embalwa.
Enye indlela yokuzazisa komnye umlambo, ngaphandle kokuba krwada okanye ungakhathaleli kumamkeli wawo, kukubamba i- ugqogqo . Ugqogqo kulapho ukhokelela khona kubaphulaphuli bakho komnye umlambo, kwaye ulahla kunye nababukeli bakho ngalo lonke ixesha ubamba usasazo lomnye umsasazi kwisitishi sakho.
Yenza umyalezo ohlasela ingxoxo yakho ukuba uyikope. Chwetheza lo mgca ulandelayo kwiWindows Chat yakho:
ukujijaKubuyiswe ukujijaKugqityiweUmdibanisoUmdibaniso womdibanisoUYAXHASWA !!! TwitchUmdibaniso womdibanisoUmdibaniso womntu
Emva koko cofa indawo enye Ncokola iqhosha, kwaye uxelele Ingxoxo yakho ukuba ikope loo mgca wokubhaliweyo.
Ngelixa unokwenza umyalezo omtsha ngalo lonke ixesha kugqatso, unokwenza ifayile ye- umyalelo onokuthi uvelise ngokulula umyalezo wohlaselo.
Vumela abaphulaphuli bakho beNcoko bazi ukuba uza kugqogqa kubani kwaye nokuba kukho iinyani ezimbalwa zokuzonwabisa malunga nokusasazeka ngokubanzi.
Xa uthumela abaphulaphuli bakho kumjelo omtsha, licebo elihle ukuqaphela ukuba ngubani ophathisa abaphulaphuli bakho. Zihamba ngantoni? Loluphi uhlobo lomntu lo msasazi? Ngaba ucinga ukuba lo mlambo ngumanyano olungileyo nomsinga wakho? Ngelixa kuhlala kulungile ukuthumela abaphulaphuli bakho komnye umsasazi okwisiKhombisi sakho seMidlalo, kuhlala kulungile ukwazi into malunga nokusasaza. Akukho nto iphosakeleyo ngokwabelana nothando kumntu oqala ukusasaza. Yazi nje ukuba umsinga unokuba ngamava ahluke ngokupheleleyo kuwe.
Chwetheza kwindawo yeNgxoxo / raid [igama lomsebenzisi] kwaye emva koko unike umyalezo wokuvala kwiNgxoxo yakho.
Isikripthi sokuvala esona sihle sihlala sibulela abantu ngokubukela. Enkosi, nonke, ngokubukela. Inkxaso yakho inceda eli jelo likhule. Masihlasele lo msasazi woyikekayo. Nizokubona umdlalo olandelayo.
Cofa indawo enye Ncokola iqhosha ukuqala uhlaselo.
Iwotshi yokubala umva iyavela. Xa ixesha liphela, abaphulaphuli bakho basiwa komnye umlambo.
Yiya kwifayile ye- Yabelana iqhosha kwi-PS4 Dualshock Controller yakho ukufikelela kwimenyu yeenketho. Ukusuka kwimenyu, khetha Usasazo lomdlalo kwaye ulandele amanyathelo abonelelweyo ukumisa usasazo lwakho.
Kwi-Xbox One, cofa kabini Xbox iqhosha elikwindawo ephezulu yomlawuli wakho ukufikelela kwiTwitch app. Landela amanyathelo abonelelweyo ukunqanda usasazo lwakho.
Umyalezo ohlaselayo ngumyalezo omnandi owusebenzisa kunye nabaphulaphuli bakho ukuzazisa xa uhlasela ijelo elitsha!
Ukusuka apha, iseshoni yakho yokudlala isimahla kwaye icacile. Ugqibile de umsinga olandelayo.
I-walmart insulin 70 30
inani leedigri zenkululeko
ivermectin idosi yokukhwekhwa ebantwini
isetyenziselwa ntoni i-zoloft
Ngaba i-lisinopril inokubangela ukutyeba